Andro: 19 mey 2020
Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? e-Government Screen Fahazoan-dàlana fandehanana: Inona no ilainao hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny fitsangatsanganana? Iza no mahazo ny antontan-taratasy fitsidihana Travel Permit? Ny filoha Recep Tayyip Erdoğan dia nilaza hoe, “Ny fahazoan-dàlana mitety varotra [More ...]
TCDD Tasimacilik dia mikasa ny hanangana indray ny High Speed ​​Train (YHT), seranam-piaramanidina sy serivisy fiaran-dalamby, izay naato noho ny fipoahan'ny coronavirus, tamin'ny volana jona raha tsy misy fiovana. Ho an'ny "vanim-potoana tetezamita" [More ...]
KPMG Turkey dia manombatombana ny vokatry ny fipoahan'ny koronavirus eo amin'ny sehatry ny lozika. Manerana an'izao tontolo izao eny an-habakabaka, fifamoivoizana an-dranomasina sy an-dranomasina, izay manondro fa mihidy ilay fijanonana miaraka amin'ireo mpitatitra mpiandraikitra ny sehatry ny fitaterana, KPMG Turkey Yavuz Öner lehibe indrindra. [More ...]
KOSGEB dia hanohana hatramin'ny 70 TL ho an'ny orinasa handraisana fiofanana avy amin'ny Model Fabrika, izay natolotry Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) hitarika ny fanovana ny nomerika orinasa indostrialy any Bursa. KOSGEB [More ...]
Ny mpandalo sarobidinay, 19 Mey 1919, teo ambany fitarihan'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nandresy ny tolona ho an'ny fahaleovan-tena ny firenena Tiorka noho ny finoana ny "na fahaleovan-tena na fahafatesana", ary ny fisian'ny firenena Tiorka tao Anatolia. [More ...]
Na dia eo amoron'ny ranomasina aza i Ordu, nilaza ny ben'ny tanàna Metropolitan Ordu fa tsy mahazo tombony amin'ny ranomasina amin'ny sehatra rehetra izy. Mehmet Hilmi Güler dia manohy tetikasa izay hampisy ny fihavanana amin'ny tanàna miaraka amin'ny ranomasina. izany [More ...]
Ny kaominina Kocaeli Metropolitan, izay manome lanja lehibe ny tetikasan'ny fitaterana mba ahafahan'ny olom-pirenena mivezivezy mora kokoa amin'ny lalambe miaraka amin'ny fiarany, dia manatanteraka asa fikojakojana sy fanamboarana ny lalana simba. Sampana miadidy amin'ny siansa [More ...]
Ekrem İmamoğlu nitana ny fampanantenany: Natao am-perinasa ny tanànan'ny Atatürk
Nandritra ny fitsidihan'ny Filoha Ekrem İmamoğlu tamin'ny 12 Oktobra 2019, ny departemantan'i İBB, Garden ary Green Areas dia nanao ny Ala tanànan'i Atatürk ao Hacıosman vonona ho ampiasaina ara-potoana. Valan'aretina [More ...]
Ben'ny tanàna İmamoğlu hanafoana ny loharano voalohany ao amin'ny zotra Metro Metrokitelli Ataköy
Ny ben'ny tanàna İmamoğlu dia hanendry loharano voalohany amin'ny İkitelli Ataköy Metro Line; Napetraka ao amin'ny Line Line İkitelli-Ataköy, misy lamasinina, izay iray amin'ireo rafitry ny lalamby lehibe ao amin'ny lafiny Eropeana, izay nanafainganana ny fanamboarana azy. Ny lanonana fanoratana voalohany teo amin'ny làlan'ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu [More ...]
19 Mey fitsangatsanganana miaraka amina bisikileta avy amin'ny Filoha Soyer
Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer dia nanatrika ny fankalazana ny faha-19 taonan'ny fankalazana ny 101 Mey Fahatsiarovana ny Atatürk, Tanora sy Fanatanjahantena ao anatin'ny sehatry ny fepetra raisina tamin'ny bisikileta. Nankalaza ny Atatürk tao amin'ny kianja Cumhuriyet ny filoha Soyer tamin'ny 07.00:XNUMX [More ...]
Fitaterana faobe any Bursa, izay mitsoka vokatry ny fipoahana, dia tsy ho toy ny taloha
Burulaş General Manager Kürşat Çapar, izay nizara data manafintohina momba ny fitateram-bahoaka izay tratry ny fipoahana, dia nilaza fa nihena 85 isan-jato ny isan'ny mpandeha. Statedapar dia nilaza fa tsy maharitra ny fitsipika an-jaton'ny mpandeha 50 isan-jato. [More ...]
Ny fampanantenan'ny minisitra Varank hifandray amin'ny İzmir OSB
ChairmanTOB Chairman Acar dia nanolotra ny Minisitra Varank hanao test Kovid-19 ao amin'ny İTOB. Amin'ny lafiny iray, Acar dia nampanantena lalam-pifandraisana misy arabe. 335 OIZ, orinasa 55.000 ary mpiasa 2.000.000 [More ...]
Ny famoizam-bola lehibe indrindra tamin'ny taonjato farany teo amin'ny varavarana
Ny EG BusinessAD Aegean Business Business Association dia manohy ny seminera ho toy ny «webinar» noho ny Covid 19. Ny fikambanana tsy manana fanjakana matanjaka indrindra any Torkia izay eo anelanelan'ny vahiny farany an'ny EGIAD [More ...]
Fiara aerobatic iray avy amin'ny Royal Canada Air Force no nifamoka nandritra ny fihetsiketsehana fihetsiketsehana hanohanana ny ady amin'ny coronavirus. Maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana i Pilot Jennifer Casey, raha ilay mpanamory kosa Richard MacDougall [More ...]
Amin'ity vanim-potoana ity, raha nitombo ny fahalianana amin'ny fivarotana an-tserasera sy ny fifanakalozana an-tserasera noho ny karazana coronavirus vaovao (Kovid-19), ny fahaiza-manao fiara, izay ankafizin'izay te hividy fiara dia asa serivisy fanendrena an-tserasera ihany koa. [More ...]
Ho fanampin'ny baikoina avy amin'ny Lehiben'ny mpiasa ao amin'ny Komitin'ny tafika an-dranomasina ary nomena ny Lehiben'ny mpiasa Jeneraly, ny Meiko Cihat Yaycı (noho ny fiheverako fa tsy misy ny fanohanana sy ny mpifehy zezika) noho ny fangatahana fametraham-pialany. [More ...]
Nekena ny fialan'ny Admiral Cihat Yaycı
Fantatra ho toy ny marisialy any atsinanan'i Tiorkia sy ny tetik'ady maoderina Libyana an-dRamatoa an'ny tafika vaomiera Jihad Yayci taorian'ny nanambarana ilay andraikitra fa nametra-pialana ny Lehiben'ny mpiasa. Raha ny fanazavana voaray, ny minisiteran'ny Fiarovam-pirenena [More ...]
Ny tsy fananana asa mavitrika dia misandratra 27 isan-jato
Eo ho eo amin'ny 15 isan-jaton'ny tanora 24-18 mipetraka ao Istanbul any Turkey. Raha ny tahan'ny fisoratana anarana amin'ny lisea dia ny 88,8 isan-jato, ny tanora 259 tsy mahay mamaky teny. Ny tsy fananan'ny tanora ny 24,8 isanjaton'ny famaritana lehibe [More ...]
Nirotsaka ny fiparitahan'ny herinaratra fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina Japoney
Ny Tafika fiarovan'ny fiaramanidina Japoney dia nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny 'Space Operations Fleet' voalohany an'ny firenena tamin'ny lanonana iray natao tao amin'ny Ministeran'ny Fiarovana any Tokyo tamin'ny 18 Mey. Ny mpitondra teny iray ho an'ny Tafika fiarovan-tena momba ny fiaramanidina Japana Janes dia nilaza tamin'i Fuchu ao andrefan'ny Tokyo [More ...]
Nanatrika ny lanonana 19 Mey tao Taksim i Imamoglu
Ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu dia nanatrika ny lanonana fananganana fehiloha izay natao tao amin'ny tsangambato tamin'ny Repoblika Taksim tao anatin'ny ambaratonga faha-19 Mey ny fahatsiarovana ny Atatürk, ny tanora ary ny andro fanatanjahantena. Ekrem İmamoğlu, Filohan'ny Istanbul Metropolitan munisipaly (IMM), 19 taona [More ...]
Nanambara ny minisiteran'ny atitany: Fikambanana mpampihorohoro ny Rosiana Çemçe PKK dia noravana
Araka ny fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Atitany, ao amin'ny distrikan'i çemçe ao amin'ny distrikan'i Kars-Kağızman, Çemçe miaraka amin'ireo mpampihorohoro 29 amin'ny hetsika tohanan'i Gendarmerie Commandos, tamin'ny 30-2020 Aprily 7, miaraka amin'ireo mpampihorohoro izay tsy miandany [More ...]
Turkey Amazon fiaraha-miasa amin'ny fampianarana nomerika miaraka amin'ny minisiteran'ny varotra
Nanafaingana ny asa fampianarana tamin'ny tontolo nomerika ny ministeran'ny varotra. Ny minisiteran'ny varotra, Amazon, dia nametraka fampiharana fampiharana toy ny Virtual Trade Academy, Export Academy ary vavahadin-tserasera momba ny fampiofanana an-tserasera ho an'ny Facebook sy SME. [More ...]
Ny fanafahana, ny fahaleovantenan'ny firenena Tiorka ary ny fananganana ny Repoblika Tiorka nandritra ny 101 taona talohan'ny 19 May 1919, ilay Lehiben'ny Lehibe Mustafa Kemal Ataturk dia nandefa ny Adin'ny Fahaleovantena tao Samsun. Manana tanindrazana mahaleo tena sy malalaka [More ...]
Iza moa ilay Admiral Cihat Yaycı?
Teraka tao Elazig tamin'ny 1966, nahazo diplaoma tamin'ny Naval High School i Yaycı tamin'ny 1984 ary Naval Academy tamin'ny 1988. Amin'ny sambo isan-karazany an'ny Command Naval Forces, toy ny biraon'ny sampana, ny lehiben'ny departemanta sy ny baiko [More ...]
Lalamby lalamby Metropolitan
Tamin'ny fanokafana ny lalamby Metropolitan ambanin'ny tany tamin'ny 10 Janoary 1863, dia tonga tamin'ny ambaratonga vaovao ny vanim-potoanan'ny lalamby rehefa nanomboka niasa tamin'ny lalina tsy nisy toy izany teo ambanin'ny lalamben'i London. Ny lalamby voalohany eran-tany, ny distrika ara-bola ao an-tanàna sy Paddington [More ...]